Somali - BBC News Somali_國際物流公司香港
Ololaha qaadacaadda alaabta uu soo saaro Faransiiska ayaa ku baahay dalal badan oo Carab ah, taa oo ka dhalatay hadalkii Madaxweynaha dalkaas Maron.
Wa kuma dilaaga dhabta ah? Gowricii loo geystay macalinkii Faransiiska
khilaafka u dhexeeya xukuumadda Paris iyo qaar kamid ah dalalka Muslimiinta ayaa cirka isku sii shareeray.
TOOS Bannaanbax looga soo horjeedo Faransiiska oo ka dhacay Burco
Ku soo dhowaada tebinta tooska ah
Maxay yihiin dalalkan diiday heshiiska mamnuucidda niyukleerka?
Hubka nuclear-ka wuxuu sii daayaa xaddi aad u farabadan oo shucaac ah - kaasoo ah mid sababi kara waxyeello badan - sidaas darteedna saameyntoodu waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxa dhaco ka dib.
Dhakhaatiir Belgian ah oo iyagoo qaba Fayraska Korona loo sheegay inay shaqadooda wataan
Toban kamid ah cisbitaallada Liège ayaa hadda ka codsaday shaqaalaha cudurka laga helay balse aan isku arag astaamaha xanuunka inay shaqada sii wataan.
Aabaheed Glenack Masilo Mama wuxuu geeriyooday iyadoo 9 jir ah, waxay inta badan carruurnimadii kusoo qaadatay ka fakarka aabaheed.
Saraakiisha xisbiga hantiwadaaga ee laga mamnuucay Ciraaq ee Bacath ayaa shaaca ka qaaday in uu geeriyooday hogaamiye caan ah oo ka tirsanaa xisbigaas oo la yirhaado Cizat Al Dowri kaas oo da'diisu lagu sheegay 78.
26 Oktoobar 2020
Haddii la rumeysanayo baraha bulshada, waxaa jira hal qof oo ku guuleystay dooddii ugu dambeysay madaxwaynannimada
24 Oktoobar 2020
Facebook oo laga dalbaday inuu mamnuuco aflagaadooyinka ka dhanka ah diinta Islaamka
Faransiiska oo ka cabanaya qaadacaadda ay ku sameeyeen qaar ka mid ah dalalka Carabta
Erdogan: Muslimiinta ayuu ku khafiifay Macron ee bal maskaxdiisa hala soo baaro
Muuqaal, Kumannaan qof ayaa ka dibad baxay bireynta macallimka ardeydiisa tusay sawir Nabi Maxamed (NNKH) lagu sheegay, Muddada 1,55
Macallimkii lagu bireeyay Faransiiska iyo isu soo baxyada ka dhashay
20 Oktoobar 2020
Muuqaal, Maxay tahay sababta ay raggan u toogteen haweeneyda dhar la'aanta ahayd?, Muddada 3,30
Rag hubeysan oo ku sugan dalka Mozambique ayaa toogtay haweeney dhar la'aan ahayd. Muuqaalka daawo.
Muuqaal, Ismahaan Caraweelo oo looga soo jawaabay maansadii ay ragga lacagta leh ku taageertay, Muddada 4,48
Nin dhallinyaro ah ayaa u jawaabay Ismahan Caraweelo oo dhowaan sameysay maanso ay ku taageertay ragga lacagta leh.
Muuqaal, Muuqaal laga helay duurjoogta ku nool meel ay ka dhacday musiibo nukliyeer, Muddada 3,41
Duurjoogta ayaa ku badbaadaya meesha ay ka dhacday musiibada nukliyeerka ee dalka Ukraine ee loo garanayo exclusion zone ee Chernobyl.
15 Sebtembar 2020
Muuqaal, Dilaaga daahsoon ee saameeyay Yemen, Muddada 3,48
Dalka Yemen waxaa saameyn ba'an ku yeeshay cudurka coronavirus, balse waxaa uga sii daran duqeymaha iyo colaadaha sokeeye.
8 Sebtembar 2020
Muuqaal, DAAWO: Ma loo baahan yahay in xilliga dhiigga caadada shaqada laga fasaxo dumarka?, Muddada 3,38
Shirkad laga leeyahay dalka Hindiya ayaa bilowday in ay fasaxdo dumarka marka uu dhiigga caadada ku dhaco. Tallaabadaas ay qaaday Zomato ayaa sababtay dood kulul.
2 Sebtembar 2020
Sawiirada Duurjoogta sannadka
Sawirro: Burburka iyo murugada Beyruud qaraxa ka dib
Sawirrada muujinaya burburka baaxadda leh ee caasimadda lubnaan, ka dib qarixii waynaa ee shalay.
Manchester City oo u gudubtay wareegga 8-dda ee horyaalka yurub
Manchester City ayaa iska xaadirisay wareegga siddeedda ee tartanka horyaalka Yurub ee Champions League kaddib marki ay Real madrid kaga adkaatay 2-1.
8 Agoosto 2020
Xiriirka Kubbadda Cagta Adduunka ee FIFA ayaa garoonka kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho u aqoonsatay garoon caalami ah.
16 Oktoobar 2020
Milkiilaha Chelsea oo malaayiin doollar siiyay shirkad dhul ka haysata Falastiin
Elad waa ha'yad ka howlgasha dhulka la heysta ee Bariga Qudus gaar ahaan deegaan la yiraahdo Silwan ama "Ir David" oo luqadda Hebrew oo loogala jeedo 'Magaaladii Daa'uud".
Weeraryahanka kooxda Barcelona ayaa imtixaankan la qaaday toddobaadkii lasoo dhaafay.
Oradyahan u dhashay dalka Spain oo sameeyay ficil ay dad badan la yaabeen
Ciyaaryahan u dhashay dalka Spain islamarkana dheela ciyaaraha fudud ayay dadka isticmaala baraha bulshada ay si wayn u bogaadiyeen ka dib markii uu u huray in guusha kaalinta saddexaad uu qaado ciyaartooy la tartamayay.
20 Sebtembar 2020
Messi oo ku guuleystay arrin uu sanado badan usoo dagaallamayay
Shirkadda Massi waxay ku doodeysay in labada magac uu jahwareer ka dhalan karo.
17 Sebtembar 2020
5 Sebtembar 2020
Yaa sugaya amniga ergooyiinka doorashada Soomaaliya?
Sunta shinnida oo "dili" karta kansarka ku dhaca naasaha
Waxay sheegeen in suntan ay dili karto labo nooc oo kamid ah kansarka ay adagtahay in la daweeyo.
Raashinka ugu dambeeya ee la siiyo dadka dilka ku xukuman ee Mareykanka
Sawir-qaade Jackie Black ayaa sawirro ka sameeyay raashinka ugu dambeeya ee ay codsadaan maxaabiista Mareykanka ee toogashada ku xukuman, ka hor inta aan la dilin.
17 Agoosto 2020
Ma taqaanaa dalka weli dadka madow loogu yeero addoon?
"Xaqiiqatan waa xaaraam in boqorad uu guursado addoon," nin ka mid ah dadka isticmaala Facebook ayaa sidaasi qoray kaddib markii uu arkay sawirka lammaanaha.
28 Luulyo 2020
Maxaa sababa in dumarka uurka leh ay raashinka qaar ku wallacaan?
16 Luulyo 2020
Sidee gabadhan $260 uga sameysay ku dhowaad $4 milyan oo dollar
Barnaamijka toddobaadle ah ee BBC-da eeThe Boss ee lagu wareysto dadka caanka ah ee horumarka ka gaaray ganacsiga guud ahaan dunida ayaa toddobadkan lagu wareystay Kimberlee Perry, oo ah gabadh sameysay shirkad qaabilsan arrimaha jimicsiga oo ku nool UK.
Lacag Dahab ah oo 1,100 sano aasnayd oo la helay
Dhalliyado iskood isu xilqaamay ayaa 425 shilin oo dahab ah, oo lagu iibsan karo guri wayn, helay.
24 Agoosto 2020
Maqaayad aan dalab lagaa qaadeyn ilaa aad ismiisaanto
Maqaayad ku taalla dalka Shiinaha ayaa ku dhaqaaqday tallaabbo aan maqaayadaha dalkaasi looga baran oo ah inuu qofka ismiisaamo kaddibna dalabkiisa uu ku saleysnaanayo hadba miisaankiisa inta uu noqdo.
16 Agoosto 2020
TOOS Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 27 Oktoobar 2020
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 27 Oktoobar 2020
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 26 Oktoobar 2020
Muddada 45,30 45:30
Xiga Dunida Iyo Maanta, 16:59, 27 Oktoobar 2020
Dadyowga aaminsan diinta waaqeefannaa ayaa ku nool qayba ka mid ah dalka Itoobiya.
58 Daqiiqadood ka hor
Tira qoraayaal ah oo wax ku qora wargeysyada dalalka Carabta ayaa ka hadlay islaam naceybka sii kordhaya ee ka jira dalalka Yurub, gaar ahaan dalka Faransiiska ka dib markii wiil dhalinyaro ah uu dilay macalin Faransiis ahaa oo ardey uu wax u dhigayay u soo bandhiagay kaartoon laga sameeyay Nebi Maxamed (SCW).
Waa qofkii ugu horreeyey ee muslim ah ee guushaasi gaara, dadka qaarna waxaa ayba sheegayaan inuu yahay qofka dunida ugu wanaagsan cayaaraha feerka fudud.
Xukuumadda Trump ayaa Soomaaliya ka cafisay lacag ka badan hal bilyan oo doollar oo qeyb ka ahayd qorshihii deyn cafinta Soomaaliya.
Jaamac Xasan, oo shaah ku iibiya magaalada Jigjiga ayaa cabasho ka muujinaya haween uu sheegay inay ku heystaan ka ganacsiga shaaha.
Salma waxay guriga ka tagtay markii ay qoyskeeda kula taliyeen inay ilmaha caloosheeda ku jira iska soo xaaqdo. Markii dambena waxay loollan galisay fikirka madow naceybka ah ee hooyadeed ay qabtay.
Ra'iisul Wasaaraha Iceland, Katrín Jakobsdóttir, ayaa isdajisay markii ay ka naxday dhul gariir dhacay iyadoo toos looga wareysanayo Telefishinka
Noocan eyga ah wuxuu ku dhashay beer uu nin ku leeyahay Jasiiradda badda Mediterranean-ka ee Sardinia.
Dagaalka u dhexeeyay ciidamada Azerbaijan iyo kuwa Armenia ayaa toddobaad la galay kaddib muranka ka dhashay gacan ku heynta gobolka Nagorno-Karabakh, waxaana xaaladda sii huriyay warar been ah oo lagu baahinayo baraha bulshada.
23 Oktoobar 2020